ဇွန်လ ၁ ရက် မနက် ၆ နာရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဇွန်လ ၁ ရက် မနက် ၆ နာရီ
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 1, 2013 in Creative Writing, Short Story | 36 comments
မေ ၃၁ ည ၊
မိုးကအတော်ကောင်းနေဆဲ ၊ ဒပ်ဖရင်ရဲ့ ကော်ရစ်ဒါမှာ ကျနော်ရပ်နေဆဲပေါ့ ၊
မိုးလေးနည်းနည်းစဲသွားတော့မှ ဆေးရုံအပြင်ဘက်က မိုးအလင်းဆိုင်လေးမှာ ကျဆိမ့်တစ်ခွက် နှင်းဆီတစ်လိပ်နဲ့
ဘာမှမမြင်ရတဲ့ ကောင်းကင်ကို ငေးမောရင်း မွေးခန်းထဲဝင်တော့မယ့်သူရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာလေးများလဲ ?
သမီးကြီးမွေးတုန်းက အကြောင်း သတိရမိသေးတယ် ၊ ဒီလို မိုးတွင်းကြီးပါပဲ ၊ နေ့လည် ၁၁း၃၅ မှာ ကိုမျိုးသန့် ကိုမျိုးသန့်ရှိလားတဲ့ ၊
မွေးခန်းအဝ သံတံခါးမှာရပ်နေတဲ့ ကျနော်က ရှိပါတယ် ကျနော်ပါဆိုတော့ မွေးပြီ အားလုံးကျန်မာသတဲ့ ၊ နေ နေပါဦး သား သားလေးလားဆိုတော့
မိန်းကလေး ပါတဲ့ ၊ ဝန်ခံပါတယ် ၊ ဟာာာ ဆိုပြီ့း့့့့  ကျနော်က သား လိုချင်သူကိုး ၊
ဒါပေမယ့် အဖွားရဲ့ အသည်းကျော် အဲဒီမြေးဦးမလေးဟာ အိမ်မှာ အလိမ္မာဆုံး ကျနော့်ကို အလိုက်အသိဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊
ရင်ခုန်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အဲဒီ အာထရာဆောင်း ဆိုတာကြီးကို တစ်ခါမှ မရိုက်ခဲ့ပါဘူး ၊
အခုလည်း ဒီလောကထဲ ရောက်လာမှာ ဘာလေးပါလိမ့် ၊ သမီးပဲ ဆိုရင်တော့ သမက် ၃ ယောက်နဲ့ ဗျာများရမယ့်ကိန်းပါလား ၊
မနက် ၄ နာရီကျော်ကျော်မှာ မွေးခန်းထဲ ဝင်သွားပြီမို့ အဲဒီနားက ကော်ရစ်ဒါမှာ ဟိုဘက်လျှောက် ဒီဘက်လျှောက်နဲ့ အတွေးတွေကလည်း ဟိုရောက် ဒီရောက်
မနက် ၆ နာရီ့့့့့ 
မွေးပြီ မွေးပြီ တဲ့ ၊
တတိယမြောက် ရင်ခုန်ခြင့်း့ 
ယောင်္ကျားလေး ယောင်္ကျားလေး တဲ့ ၊
အို ဘာပြောကောင်းမလဲ ၊ မိုးသားတွေကင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့် ပီတိဆိုတဲ့အရသာ
ဘေးက လူတစ်ယောက်က သားရတာ အဲသလောက်ပျော်သလား ကျနော်ကတော့ သားချည်း ၃ ယောက် မျက်စိကိုနောက်လို့ဗျာ ၊ ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းကလေး ဗျတဲ့ ၊
အေးလေ သားလိုချင်သူက သမီးရ ၊ သမီးလိုချင်သူက သားရ ၊
တကယ်တမ်းကျတော့လည်း အားလုံးဟာ ရင်နှစ်သည်းချာ ရတနာလေးတွေပါပဲလေ ၊
မွေးခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ သားကို ကြည့်မိတော့ အမယ် သောက်ဘဲ ငါ့ထက်ဖြူသဟ ၊ ရူပကာကလည်း ငါ့ထက်စွံမယ့်ပုံပဲ ၊
ကဲ ငါလိုချင်လှတဲ့သား ငါရခဲ့ပြီ
သားဆိုတော့ အဖေဘယ်သွားသွား ခေါ်သွားလို့ရပြီလေကွာ နော် ၊
ရက်သားလေးပဲ ရှိသေးတဲ့ မင်းကို လဘက်ရည်ဆိုင်ခေါ်သွားလို့ မင်းအဖွားလေ ငါ့ကို အသေကျိန်းတာ ၊
အဖေကတော့ ဘယ်သိမလဲကွာ ၊ သွားလေရာ ပါမယ့်အဖော် ရပြီလို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်တာကိုး ၊
နာမည်ပေးကြမယ်ဆိုတော့ မင်းအဖွားက ( သက်ဦးမောင် ) တဲ့ ၊ ဟား ဟား အဲဒီနာမည် ဘာလို့ပေးလဲ သိလားသား ၊
မင်းအဖွား မင်းကို စ မြင်မြင်ခြင်း သြော် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်က မျက်လုံးလေးတွေပါလား တဲ့ ၊
မင်း မျက်လုံးက မင်းအဖိုးနဲ့ အတော်တူဆိုပဲ ၊ အဖေကတော့ မမြင်ဖူးလို့ သိဘူးလေ ၊
မင်းအမေကတော့ မင်းကို ( မင်းသုတ ) ဆိုပဲ ၊ တော်သေးတာပေါ့ မင်းကုသ မဟုတ်လို့ ၊
ဒါပေမယ့် အဲဒီနာမည် ၂ မျိုးလုံး ဗီတိုအာဏာနဲ့ အဖေပယ်ချခဲ့တယ် ၊
ငါ့သားကို အဖေဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေချင်တာမို့ အဖေ့နာမည် ( သန့် ) ဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားလိုက်တယ် ၊
ပြီးတော့ကော့ 
အဖေ့ဘဝမှာ သိပ်ချို့တဲ့ခဲ့တာ မရှိပေမယ့် လိုအပ်ခဲ့တာတွေ ပါနေတာမို့ သားကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝမျိုးနဲ့ပဲ တိုးစေချင်တယ် ၊
အဲ ပြီးတော့ အဲဒီကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝမျိုးမှာ သားကို သက်ဆုံးတိုင် စံစားစေချင်တယ် ၊
ဒါကြောင့် သားနာမည်ဟာ သန့်ကောင်းစံ
ယနေ့ မွေးနေ့မှသည် ရာသီအလီလီတိုင်းမှာ
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြ လှပသောဘဝနှင့်အတူ လူပီသသောသူ ဖြစ်ပါစေ သားရေ ။
သမီးကြီးက ၁ နှစ်သမီးကတည်းက သူ့အဖွားနဲ့ အတူအိပ်သူပါ ၊
အမေကလည်း သူ့မြေးဦးကို အရမ်းချစ်တာကိုး ၊
အခုလည်း အမေ့ငွေကိုင်ဟာ သမီးကြီးပါ ၊
သန့်ကောင်းစံ လူဇိုး.. ခွေးဂျီးမှ ဖက်ရဒယ်လို့ကွာ…. မင်းအမတွေရော အဲလိုဗဲလား.. ဒါဆိုရင်တော့ ငါနဲ့တွေ့တော့မောင်.. ရမ်မဖြစ်ရစေနဲ့ကွာ… လူဖြစ်တုံး တခဏလေး ပျော်ပျော်ဂျီး ယောက္ခမနဲ့ ယောက်ဖနဲ့ ခယ်မနဲ့ နေသွားဂျင်ဒယ်… ဩော်ဒါနဲ့ မေ့တော့မလို့.. ဟက်ပီးဘက်သ်ဒေးပါကွာ..။ :harr:
ဓါတ်ပုံထဲ ခွေးထည့်ရိုက်တာ ပြောစရာ ဖြစ်ပြီ
မျိုးဆက်သစ် လေး သန့် ကောင်းစံ
နိုင်ငံ အတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်မယ့် သားကောင်းဖြစ်လာပါစေကွာ
သားလေး သန့်ကောင်းစံ တစ်ယောက်
ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော လူရည်မွန်လေးဖြစ်ပါစေဗျား… :528:
တူလေး သန်.ကောင်စံလဲ မွေးနေ.မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ…. မိဘ မောင်ဖွား မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ. ကျန်းမာချမ်းသာစွာ နေနိုင်ပါစေလို. နိုင်ငံသားကောင်းရတနာ မိဘ အားလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်တဲ့ သားကောင်းသားမြတ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို. ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…
ကိုမျိုးသန်.လို ခံစားမှုမျိုး သိပ်မကြာခင်ကျွန်တော်လဲ ကြုံရတော့မှာပါဗျာ…. ဟဲဟဲဟဲ
ဒါနဲ့ သမီး ဆိုရင်တော့ ကြောင်ကြီးတို့ အံစာတို့ကို သတိထားဗျို့
ဟုတ်သမီးလို. အယ်ထာဆောင်က ပြောဒါဘဲ…
ရပါတယ်… အံစာဒုံးကို သမတ်တော်ပြီး ဂလုံးဂလုံး ၀ိုင်းထောင်စားပြစ်မယ်…
ဦးကြောင်ကြီးကို သမတ်တော်ပြီး…. တရုပ်လုပ်ပစ္စည်းတွေ သွင်းစားမယ်…… ဒါဘဲ…
ဘာစကား ပေါဒါတုန်း .. ဟွန်းးနော် …
ဒက်ဒက် မတော်ဘဲ နေပလိုက်မှာ ..
သားလေးရေ .. ယခုမွေးနေ့မှ စပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ..
ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ သားကောင်းရတနာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေကွယ် ..
Happy Birthday dear Thant Kaung San.
ဟက်ပီး ဘက်ဒေးပါနော့ …
မင်း မမဂျီးဒွေရော နေကန်းဒလားကွ …
ကိုဂျီးအံ က အမေးတော်ရှိကြောင်း ပြန်ပေါပေးဘာအုံးကွာ ..
နော် .. ကွာ …
မင်း ဒက်ဒီဂျီး က ဘာမွှ အားမကိုးရဘူးကွ ….
သမီးတွေက မျက်နှာများသူမျိုး မစဉ်းစားတာမို့
ခြောက်မျက်နှာကိုအံစာရယ် လက်လျှော့လိုက်ပါကွယ် နော်
ကိုမျိုးသန့်က ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတိတွေ အတော်ရေးတယ်နော်၊
ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာပေါ့ ဖတ်ရတာ ခဏခဏမို့လေ။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ရေးရတာ အန္တရာယ်ကင်းတယ် ဆရာရဲ့
ဟို ကြောင်ကြီးအကြောင်း အံစာအကြောင်း ကိုကြီးမိုက်တို့အကြောင်းရေးရင်
မတော် ပြဿနာရှာရင် ဒုက္ခလေ ၊
နောက်ထပ် ဘဝအကြောင်းတွေ လာဦးမှာပါ ၊
ဥပမာ သံယောဇဉ်တွေ ဘာတွေ တွေ့လာရင်ပေါ့ ။
အဲဒီခွေးလေးက တွံတေး ဘုရားကြီး မင်္ဂလာတိုက်ကျောင်း
မိဘမဲ့ ပရဟိတဂေဟာက ခွေးလေးပါ ၊
အလှူသွားရင်း ရိုက်ခဲ့တာပါ ။
ကိုးမျိုးသန့်ရေ … အရေးကောင်းလေးမို့ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ။ အရင် post တွေထဲမှာ ကလေးတွေမွေးနေ့ လာတော့မယ်ပြောထားတာမှတ်မိပါသေးတယ်။ သန့်ကောင်းစံ လေးရေ Happy Birthday ပါနှော်။ မိသားစု နှင့် နိုင်ငံတော်က အားထားရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေဗျား။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ မှသည် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နဲ့ ပိုပြီး အောင်မြင်သော ဘဝ ကို လျှောက်လှမ်းရပါစေ သားလေးရေ။
ဒီလို အင်မတန် စေတနာထား ဂရုစိုက်တဲ့ အဖေ ရတာ ကိုက သူတို့ဘဝ မှာ အကောင်းဆုံး ဆုလာဘ်ပါ ကိုမျိုးရေ။
သားလေးက လူချောပဲ ။
Happy Birthday Kaung Kaung.
Happy Birthday ပါ သားလေး ကောင်းကောင်း….
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မောင်လေးရေ…..ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ကို တစ်သက်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
ဟုတ်ပါပြီ သားများရှင် ရေ
လို့ ခေါ်တဲ့ ကလေးမတွေ အတော်များမှာပဲ လို့။
Happy Belated Birthday to Kaung Kaung
နောက်တခေါက်တွေ့ဆုံပွဲလာရင် ကောင်းကောင်း ကိုခေါ်ခဲ့ပါဗျို့။
ဆူရှီရောင်းပွဲတုန်းက စကားမပြောလိုက်ရလို့ အကြွေးပြန်ဆပ်ချင်လို့..
သားကလည်း အဲသလိုပွဲရှိရင်ခေါ်ပါ တဲ့ ၊
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က သားပုံစံနဲ့ ဒီကနေ့ သားပုံစံ သိပ်မတူချင်တော့ဘူး
၉ တန်း ကျောင်းသားကြီး ဖြစ်လာပြီပဲလေ ၊
သား ဘွဲ့ရတဲ့အထိ အဖေတောင့်ခံထားပါတယ် သားရေ ၊